Daadmadheedh & Sahanka Shidaalka - Galmada.net
Daadmadheedh & Sahanka Shidaalka
Sida laga warqabo waxa maalmahan Jamhuuriyadda Somaliland ka socday hawlo lagu sahaminayo shidaalka ku duugan dhulka hoostiisa. Gobolka Daadmadheedh ayaa ka mid ah meelaha la doonayay in laga fuliyo hawshaas. Haddaba darraad ayaa waxa magaalada Oodweyne yimid qolyahii hawshan sahaminta shidaalka fulin lahaa. Qolyahan ayaa igu jiray dadka muwaadinin ah iyo kuwo caddaan oo ka socda shirkaddii hawsha fulin lahayd. Iyagoo hargahoodii wata ayay magaalada yimaaddeen. Cid ka socota Wasaaradda Macdanta iyo Tamarta Jamhuuriyadda Somaliland ee shaqadan ka masuulka ahaydi lamay socon, kaliya waxa ay ahaayeen shaqaale u adeegaya shirkaddan. Sida oo kale ciddii gobolka ka masuulka ahayd lama ay soo xidhiidhin, ee hawshii ayuunbay iska guda galeen.
Arrintani ayaa waxay aad uga cadheysiisay kana gadooday bulshada ku nool Gobolka Daadmadheedh iyo Degmada Oodweyne. Waxa ilaa shay iyo maanta la arkayay shacab badan oo arrintan aad u hadlaya una dhaliilay, sidoo kale waxaa la arkayay dad badan oo arrintan ka gaashantay oo sita hub ay arrinkan kaga hortagaan. Xalay waxa la maqlayay dhawaqa rasaas ka socota gudaha Degmada Oodweyne, arrintan oo naxdin badan ku abuurtay bulshada. Rasaastaasi waxa la ogaaday in ay rideen qaarka mid ah askartii ilaalinaysay shaqaalaha iyo masuuliyiinta ka socotay shirkadda shidaalka, taas oo ay sabab u ahayd shiid ama dhagax tuur ay sameeyeen qaar ka mid ah dhalliinyada ku nool magaaladu.
Haddaba arrintani waxa ay kuu caddeynaysaa in aanay jirin wax wacyigalin ah oo bulshada laga siiyay arrinkan ah sahaminta shidaalka,taas na waxa sabab u ah odayadii, cuqaashii iyo masuuliyintii arrintan loo xirsaaray oo kaa gaabiyay in bulshada ay u caddeeyaan hawshani waxa ay tahay iyo faa’iidada laga helaayo. Sidoo kale waxa gododkan bulshadan kow ka ahaa bulshada ku nool Gobolka Daadmadheedh oo aan saami wacan ka helin shaqaalahii hawshan ka hawl gali lahaa, sababta oo ah dadkii deegaanka ku noolaa waxa ay tabayaan kaalintoodii shaqo ee hawshan kaga aaddanaa.
Haddaba halkan waxa inoog baxaysa in Gobolka Daadmadheedh aan shiidaal laga sahamin kareyn haddii aan bulshada ku nool deegaanka laga dhaadhicin, laga qancin laguna wacyigalin hawshan baaxadda leh. Sidoo kale bulshada ku nool deegaanka Gobolka Daadmadheedh waligood gaadhi maayaan horumarka ay naawilayaan haddii ay hor istaagaan cid walba oo doonaysa in ay gobolkooda ka fuliyaan hawlo shaqo, kuwaas oo horumar lagu gaadhi karaayo. Bulshadu ma aha in lagu daan gaadho mana aha in laga dhaadhiciyo wax aan jirin oo kuti-kuteen ah, haddiin kale waxa ay ka dhaxli doonaan dhib-u-dhac aad u weyn ragaadiya arligooda iyo ubadkooda ba.
Ugu danbeyn hawshan haatan Gobolka ka taagan waa in si dhakhso ah wax looga qabtaa. Waa in ay bulshadu arrinkan rogrogtaa kana eegtaa meelo badan oo kala duwan si aanay hadhow uga shalleynin. Sidoo kale dawladdu waa in ay arrin ka hawl gashaa lana shaqeysaa bulshada iyo cidda ay ka masuulka yihiin, waana in ay iska daysaa talada uu leeyahay Gobolka Daadmadheedh misana laga soo goynayo gudaha Hargeysa. Ogaada halka ay gogushu taallaa ma ah Hargeysa ee waa Oodweyne.
Xigmado Dahabi Ah